Otu esi etinye Redis & Hazie na AlmaLinux 8 - LinuxCapable
October 27, 2021 October 14, 2021 by Jọshụa James
Na njedebe nke ntuziaka, ị ga-ama otu esi etinye na hazie Redis na AlmaLinux gị sistemụ nrụọrụ.
Site na ndabara, Redis na-abịa na iyi AlmaLinux ndabara. Agbanyeghị, ị nwere nhọrọ nke ịwụnye usoro Redis 5 ma ọ bụ 6. Site na ndabara, a na-ahọrọ ọtụtụ nkesa Linux, gụnyere AlmaLinux usoro 5.
Ka ilele modul dị ka ịwụnye Redis, jiri iwu na-esonụ na ọdụ gị.
Dị ka ị pụrụ ịhụ na mmepụta, usoro 5 bụ ndabara na ọkọlọtọ [d] na kọlụm iyi. Ikekwe ịchọrọ ịwụnye ụdị Redis ọhụrụ. Iji mee nke a, jiri iwu na-esonụ iji gbanwee nsụgharị.
ụdị "Y", pịa pịa "Tinye igodo" ịga n'ihu na ntinye
Tinyegharịa ya dnf modul ndepụta redis iwu ka ịhụ ndabara ọhụrụ, wee tinye Redis na nkuzi na-esonụ.
Ọ bụrụ na ị nwere echiche nke abụọ ma ọ bụ chọọ usoro Redis 5, ị ga-achọ iwepụ usoro Redis dị ugbu a 6 wuo wee tọgharịa ndepụta modul na ndabara na iwu na-esonụ.
Ekele, ị tinyela Redis na sistemụ arụmọrụ AlmaLinux gị wee chọpụta na ọ na-arụ ọrụ. Na-esote, ị nwere ike hazie Redis.
N'ime ntuziaka ahụ, ị ​​mụtala ka esi etinye Redis na AlmaLinux 8 site na iji ebe nchekwa ndabere ya site na njikwa ngwugwu dnf. Ị mụtala otu esi anwale ọrụ ahụ site na ịpị ya na ịgbanwe oke ebe nchekwa yana interface netwọk iji dabara na nhazi dị iche iche.
Categories AlmaLinux Tags AlmaLinux, Redis Mail igodo
2 echiche na "Otu esi etinye Redis & hazie na AlmaLinux 8"
November 7, 2021 na 4: 40 pm
Hazie Firewalld maka Redis? Mpaghara na ip 127.0.0.1 ị chọghị.
November 7, 2021 na 5: 26 pm
Ndewo Emidio, Daalụ maka ozi ahụ.
Ee, ị nọ maka ya 127.0.0.1 (localhost), nkuzi depụtara firewalld nhọrọ maka na-abụghị nke obodo (mpụga). Ekwesịrị m ime ka nke a pụta ìhè na m ga-edozi nkuzi ahụ iji kwupụta nke a.